Bit By Bit - Mifehy - 6.4.1 Ny fanajana ny olona
Ny fanajana ny olona dia ny mitondra ny olona toy ny mizaka tena sy ny fanajana ny faniriany.
Ny tatitra Belmont dia milaza fa ny fitsipiky ny fanajana ny olona dia misy fizarana roa miavaka: (1) ny olona dia tokony halaina ho toy ny fahaleovan-tena ary (2) ireo olona manana fahaleovan-tena mivoatra dia tokony hanana zo hiaro azy bebe kokoa. Ny fahaleovan-tena dia mifanaraka tsara amin'ny famelana ny olona hifehy ny fiainany manokana. Amin'ny teny hafa, ny fanajàna ny olona dia milaza fa tsy tokony hanao zavatra ho an'ny olona ny mpikaroka raha tsy misy ny faneken'izy ireo. Raha ny marina, mitazona izany na dia mihevitra aza ny mpikaroka fa ny zavatra mitranga dia tsy mampidi-doza, na dia mahasoa aza. Ny fanajana ny olona dia mitarika ny hevitra fa ny mpandray anjara-fa tsy mpikaroka no afaka manapa-kevitra.
Amin'ny fampiharana, ny fitsipiky ny fanajana ny olona dia nadika hoe midika fa ny mpikaroka dia tokony mahazo, raha azo atao, ny faneken'ny mpandray anjara. Ny hevitra fototra amin'ny faneken'ny iraka dia ny tokony hampisehoana ireo mpandray anjara amin'ny fampahafantarana manan-danja amin'ny format malalaka ary tokony hanaiky an-tsitrapo handray anjara. Ny fehezan-teny tsirairay dia voan'ny adihevitra sy ny vatsim-pianarana fanampiny (Manson and O'Neill 2007) , ary hanokana ny fizarana 6.6.1 ho an'ny fanekena.
Ny fampiharana ny fitsipiky ny fanajàna ny olona amin'ireo ohatra telo manomboka eo am-piandohan'ny toko dia manasongadina ireo toerana ahiahiana amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Amin'ny tranga tsirairay, ny mpikaroka dia nampiasa ny fampahalalany (Tastes, Ties, or Time) ny zavatra noraisin'ireo mpandray anjara, nampiasa ny ordinaterany izy ireo hanatanteraka tetik'asa fitaratra (Encore), na nampiditra azy ireo tamin'ny traikefa (Emotional Contagion) - tsy manaiky . Ny fanitsakitsahana ny foto-kevitry ny Respect for Persons dia tsy mampihatra avy hatrany ny fandaharam-pianarana tsy azo ekena; Ny fanajana ny olona dia iray amin'ireo fitsipika efatra. Saingy mieritreritra ny Respect for Persons dia manolotra fomba sasantsasany ahafahana manatsara ny fianarana. Ohatra, ireo mpikaroka dia mety nahazo endrika fanekena avy amin'ireo mpandray anjara talohan'ny nanombohan'ny fandalinana na aorian'ny fifaranany; Hiverina any amin'ireto safidy ireto aho rehefa miresaka momba ny faneken'ireo voalaza ao amin'ny fizarana 6.6.1.